Go’aan laga gaarey dekedda Slite inaan laga kireeyn Nordstream - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dekedda Slite ee carriga Gotland. sawir: Sawirle: Karl Melander/TT
Go’aan laga gaarey dekedda Slite inaan laga kireeyn Nordstream
La cusbooneeyay torsdag 15 december 2016 kl 15.31
La daabacay torsdag 15 december 2016 kl 13.50
Guddiga teknikada ee Gotland ayaa go’aan diidmo ah ka gaaray inaan dekedda Slite laga kireeyn shirkadda Nordstream.
- Waxaannu go’aan ku gaarney inaan la kireeyn dekedda Slite, middaasina oo ka dambeeysay kulankii dhowaantan aannu la yeelaney wasiirka arrimmaha dibadda iyo difaaca iyo war-bixintoodii la xiriirtay xaaladda ammaanka, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga teknikada Tommy Gardell oo u warramay shirkadda wararka Sweden ee TT.
Gardell ayaa raali-gelin ka bixiyay in guddigu ku khasbanaaday inuu diidmo ku coddeeyo.
- Culeeys ayaa la dareemeyaa. Maadaama qandaraaskaasi wax wayn ugu fadhiyay dekedda Slite iyo gobolka guud ahaan. Waa mid laga xumaado inaan qandaraaskaa la helin. Middii ka horreeysay ee Nord Stream 1 waannu ku guuleeysanney, hase yeeshee iminka xaaladda ayuu is-bedel ku dhacay, sida uu sheegay Tommy Gardell.
Dhawaantan ayay ahayd kolkii ey badankood siyaasiyiinta Gotland isku raacsanaayeen iney in shirkadda Nord Stream laga kireeyo dekedda Slite, sidii ay shirkaddu ugu isticmaali lahayd kaydka tubbooyinka lagu talo jiro in badda la dhigo sidii loo soo marin lahaa gaas ka yimaada dalka Ruushka kuna wajahan dalka Jarmalka. Hase yeeshee kulankii maalintii salaasada ey wasiirka difaaca iyo arrimmaha dibaddu la yeesheen hoggaanka Gotland iyo Karlshamn ey ku war-geliyeen xaaladda difaaca iyo welwelka laga qabo, iyadoona dabadeed uu hoggaanka gobolka Gotland go’aansaday inuu dib uga laabto go’aan-qaadashadiisii hore. Maamulka Karlshamn ayaa go’aansaday in la qaboojiyo heshiiskii ey horay u wada gaareen shirkadda Nord Strean.
Sweden suurtagl uma ahan inay joojiso tuubada gaaska ee warta Östersjön